Mafi Dova – Xaafad in lagu dhalo ay danbi tahay! | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Mafi Dova – Xaafad in lagu dhalo ay danbi tahay!
Mafi Dova – Xaafad in lagu dhalo ay danbi tahay!
Himilo – Xaafadda Mafi Dova ee koofurta Ghana waxaa ku nool shan kun oo qof oo midkoodna uusan ku dhalan gudaheeda. In lagu dhalo carruur dhexdeeda waxaa loo arkaa mid aan la qaadan karin sababo caqiido oo ay rumeysan yihiin awgeed. Sidaas darteed, hooyooyinka fooshoodu soo dhowdahay, waxaa loola cararaa duleedkeeda si ay ugu soo dhalaan.
In kasta oo sida bulshooyinka kale ee reer Ghana ay Mafi Dova leedahay dhaqamo kala duwan, haddana waxaa jira waxyaalo badan oo xaafaddan aan laga oggoleyn taas oo ka dhigtay mid ka soocan inta kale. Tusaale ahaan, lagama oggola dhaqashada xoolaha, mana laga yaabo inaad ku aragto noole aan ka aheyn shinbiraha ku dul haadaya oo kaliya. Waxaana dhaqankan uu sidoo kale soo taagnaa muddo aan loo xusuusan karo. Balse in qofku magaalada la yimaado neef isla maalinteeda uu gowracdo waa loo oggol yahay, laakiin looma oggola inay ku dhex raacaan ama foofiyaan.
Waxa kale ee la-yaabka leh oo xaafaddan ay gaarka ku tahay ayaa ah inaan laga oggoleyn in qof lagu xabaalo ama lagu duugo marka uu dhinto. Waxaana meydka loo qaadaa qubuuraha ay leeyihin xaafadaha kale. In carruur lagu dhex dhalana waa midda ugu weyn iyadana.
Laba bil kahor inta aysan fooshu soo dhawaan, hooyada uurka leh waxaa loo diraa xaafadaha kale si ay ugu soo dhasho.
Caadadan ay rumeysan yihiin waxaa lala xiriiriyaa duqii ugu horreeyey ee xaafadda degaamaysta. Togbe Akiti oo ahaa helaha xaafaddan ayaa la sheegaa in samada uu ka maqlay dhawaaq faraya in haddii uu rabo inuu ku noolaado kobtan barakeysan uu raaco saddex shuruud; inaan ilmo lagu dhali karin, xoolo lagu dhaqan karin; meydna aan lagu aasi karin.
Mararka qaar haddii ay dhacdo in si lama filaan hooyo ugu dhex umusho xaafadda, odayaasha waxay ku dhaqaaqaan tallaab Alla-bari ah oo lagu weydiisanayo danbi-dhaaf. Hooyooyinka ay dhacdo inay ku dhalaan xaafadda lama ciqaabo, waxaase loo fishaa inay dhalaan carruur sirgaxan oo aan abuurkooda dhammeyn. Hayeeshe ilaa hadda lama hayo carruurta lagu dhalay halkan oo lagu arkay calaamado dhicisnimo muujin kara.
Haweenka xaafadda ayaa hadda ku talinaya in dhaqankan soo-jireenka ah la laalo si ay ugu dhalaan xaafaddooda.
Previous: La kulan – Ninkii naafadda ahaa ee beeray 17,000 geedo ah!
Next: Arsenal oo heshiis wakhti dheer ka saxiixaysa Bukayo Saka